Dimkpa Agụ m: Ndewo! – Ọmọ Oòduà
Home / News From Nigeria / Breaking News / Dimkpa Agụ m: Ndewo!
Posted by: Lolade in Breaking News, Ọmenala ndị Igbo
Ụwa dịwakwara gị mma-oo! Biko, onye adakwala mba n’ihe gbasara asụsụ Igbo ka ewu ghara ịta anyị igu n’isi. Onye gbuwe achara onye gbuwee, onye akpọla ibe ya onye ikonyi. Onye ọbụla ahụla etu nwanne anyị, Abraham Madụ, ji-agbalị n’okwu Igbo, ma aghaara otu onye ụwa, ihe ụwa na-anyịgbu ya. Ma Chukwu ekwekwala!
Biko, onye ọbụla jisie ike! Njem ka dị anya! Onye chetara ife n’Igbo, biko ya fee ya! Onye ọbụla jisie ike nọrọ na nkwadebe maka mmemme ndị Igbo na-eme n’Igbo Village n’afọ abịa abịa. Onye chọrọ ịmụta Omenala Igbo, ya bịawa n’ebe ahụ! Ndị CISA na-agbalị nke ukwu ịkwalite Omenala na Asụsụ Igbo. Ndị CISA na-akụzi etu esi atapị okwu Igbo n’eleghị anya n’azụ. N’afọ gara aga, ha kpọtara ndị Ọkacha maara – Archbishop Obinna (Nke Odenigbo) na Prọfesọ Ejiọfọ (Nke Sụwa Igbo) n’Igbo Village. Ndị ọzọ nọ na nkwadebe maka afọ 2016! Bịa ka ị were anya gị hụụ ike ndị CISA na-akpa n’Igbo Village dị n’obodo Staunton, Virginia. Omenala ndị Igbo na-arị ibe ha elu. Mmemme Omenala nke 2016 ga-adanye n’ọnwa Julaị 28-30.
Ngwa, ka ọ dị! Dịka ị kwuru, ka anyị na-aga n’ubi ka ji na-aka!
Ọmenala ndị Igbo	2015-11-10
Previous: Top 10 Hollywood Celebs That Have Endured S3x Tape Scandals
Next: Photo: Please who is Gov. Ambode ?